विश्वका यी ५ कुराबारे आजसम्म अन्जान छन् वैज्ञानिक ! « Lokpath
२०७७, ७ माघ बुधबार १०:१४
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ माघ बुधबार १०:१४
१. सन् १९३० मा अनुसन्धानकर्ताले एउटा घना जंगलमा १६ टन तौलको पत्थरको बारेमा अनुसन्धान गरेका थिए । यी पत्थरहरु मानव निर्मित हुन् ।
३. विश्वभरमा केहि फरक फरक ठाउँमा चक्रवात तुफान जस्तो आकृति पाइन्छ । तर सबै ठाउँमा एकै किसमको ठाउँ कसले बनाउँछ यो कुरा अहिले सम्म रहस्यमै सिमित छ । जानकारीका अनुसार केहि प्राकृतिक आपद्का कारण यस्तो बन्ने गर्छन् । भनिन्छ यो काम भगवानले गर्ने गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार यो ठाउँमा धेरै पहिला मानिसहरुको बस्ती थियो । तर अचानक त्यहाँबाट सबै मानिसहरु गायब भएका थिए । त्यसबारेमा आजसम्म वैज्ञानिकहरुले केहि पत्ता लागाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि त्यो ठाउँमा जान मानिसहरु डराउने गर्छन् ।
काठमाडौं । हामी सबैलाई हाच्छिउँ बेलाबेलामा आईनै रहन्छ । तर कुनै समयमा मानिसहरु
साङ्लाको जुस पिउने अनौठो देश
काठमाडौं । हामीलाई साङ्ला भन्ने बित्तिकै घिन लाग्छ । घरमा साङ्ला देखियो भने
‘हट फिगर’का कारण विश्वको ध्यान तानिन् यी बालिकाले, १५ वर्षमा देखिन्छिन् तन्नेरी
काठमाडौं – समाचार शिर्षक देखेर तपाई पक्कै अचम्मीत पर्नुभयो होला । यी बालिकाले
हाकिमले दिएनन् छुट्टि : स्टाफले गरे आफ्नै अपहरणको नाटक
काठमाडौं । अफिसबाट छुट्टि पाँउन हरकोहिलाई गार्हो हुन्छ । अफिसबाट छुट्टि पाँउन मानिसहरुले